RASMI: Real Madrid Oo Heshiis La Gashay Xiddigii Xulka Spain Ka Cidhiidhsaday Sergio Roberto Ee Alvaro Odriozola | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
RASMI: Real Madrid Oo Heshiis La Gashay Xiddigii Xulka Spain Ka Cidhiidhsaday Sergio Roberto Ee Alvaro Odriozola
(06-07-2018) Labada kooxood ee Real Madrid iyo Real Sociedad ayaa si kala gooni gooni ah ugu dhowaaqay in laacibka difaaca midig ee Alvaro Odriozola uu heshiis lix sannadood ah u saxeexay kooxda Real Madrid, isla markaana uu tijaabada caafimaadka u mari doono maal aha soo socda.
Kooxda kubadda cagta ayaa ku dhowaaqday inay ku guuleysatay heshiis ay la gashay kooxda Real Sociedad iyo da’yarkeeda difaaca midig ee Odriozola oo qalinka ku duugay heshiis lix sannadood ah, kaddib markii ay ogolaadeen inay Real Sociedad u shubaan lacag dhan 40 milyan oo Euro.
War qoraal ah oo Real Madrid ay ku baahisay barteeda Twitterka ayaa ay ku xaqiijisay heshiiska oo soo afjaraya maalmo hadal hayn iyo wadahadallo ah oo masuuliyiinta labada kooxood u socday. Sidaas oo kale, war-saxaafadeed lagu baahiyey barta Twitterka ee Real Sociedad ayaa waxa lagu sheegay in Sociedad ay heshiis kala gaadhay Real Madrid difaaceedan oo u wareegi doona Madrid.
War-saxaafadeedka Real Madrid soo saartay ayaa waxa lagu yidhi: “Real Madrid iyo Real Sociedad waxay ka heshiiyeen la kala wareeggidda ciyaaryahanka Alvaro Odriozola, waxaana u hadhay tijaabada caafimaadka, kaddibna waxa uu ku xidhnaan doonaa kooxda lixda xili ciyaareed ee soo socda.”